Yakachipa Yakanyanya Kupisa Kwekupisa Waste & Mufudze Kuvira Kusanganisa Tangi Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Horizontal Fermentation Tank?
Kupisa Kwakanyanya Tsvina & Mufudze Kuvira Tangi inonyanya kuita yakanyanya-tembiricha aerobic kuvirisa yezvipfuyo nehuku manyowa, kicheni marara, sludge uye imwe tsvina nekushandisa chiitiko chehutachiona kuwana yakasanganiswa sludge kurapwa iyo isingakuvadzi, yakagadzikana, yakaderedzwa uye ine zviwanikwa.
Iyo Tsvina & Mufudze Kuvira Kusanganisa Tangi zvinoshanda sei
Kutanga, isa zvinhu kuti zviviriswe mu Tsvina & Mufudze Kuvira Tangi kubva kudyisa chiteshi kuburikidza nebhandi rinotakura. Paunenge uchiisa izvo zvinhu, tanga main mota, uye iyo yekumhanyisa mota inoderedza iyo huru shaft kutanga kusanganisa. Panguva imwecheteyo, iyo inovhuvhuta mashizha pane inomiririra shaft inoshandura mhuka zvigadzirwa pamusoro, kuitira kuti izvo zvinhu zvinyatso kusangana nemhepo, kuti izvo zvinhu kuti zviviridzwe zvitange kuitirwa aerobic Fermentation.
Kechipiri, iyo yekudziya sisitimu yemagetsi yekudziya tsvimbo pazasi inodzorwa nebhokisi remagetsi kutanga kupisa iyo kupisa kupisa mafuta mune inopindirana yemuviri wekusimbisa. Ipo ichipisa, iyo tembiricha yemuviri wekusimbisa inodzorwa neiyo tembiricha sensor kudzora tembiricha yeiyo Fermenter panzvimbo yekuvirisa. Nyika inodiwa. Mushure mekuvirisa kwemashoko acho kwapera, zvinhu zvacho zvinoburitswa kunze kwetangi padanho rinotevera.
Chimiro che Tsvina & Mufudze Kuvira Tangi inogona kukamurwa kuva:
1. Kudyisa system
2. Tangi rekuvirisa system
3. Simba kusanganisa system
4. Kuburitsa hurongwa
5. Kuchenesa uye kupisa kuchengetedza system
6. Chikamu chekuchengetedza
7. Zvizere otomatiki emagetsi control system
Zvakanakira Waste & Mufudze Kuvira Kusanganisa Tank
(1) Midziyo idiki muhukuru, inogona kuiswa panze, uye haidi chivakwa chefekitori. Iyo fekitori yekugadzirisa mbozhanhare, iyo inogadzirisa yakadhura mutengo chinetso chekuvaka kwezvirimwa, kufamba-kure-kurekufambisa uye kwepakati kugadzirisa;
(2) Chisimbiso kurapwa, deodorization 99%, pasina kusvibiswa;
(3) Kupisa kwakanaka kwekushisa, kusingagumi nemwaka unotonhora, kunogona kuviriswa zvakajairika mune zvakatipoteredza pazasi pekubvisa 20 degrees Celsius;
(4) Yakanaka michina zvinhu, gadzirisa dambudziko reakasimba acid uye alkali ngura, hupenyu hwakareba hupenyu;
(5) Kupusa kushanda uye manejimendi, yekuisa mbishi zvinhu senge mhuka mupfudze, otomatiki inogadzira organic fetiraiza, nyore kudzidza uye kushanda;
(6) Iyo yekuvirisa inotenderera ingangoita maawa 24-48, uye iko kugona kwekugadzirisa kunogona kuwedzerwa zvinoenderana nezvinodiwa.
(7) Kuderera kwesimba kushandiswa, zvichideredza zvakanyanya mutengo wekugadzira magetsi;
(8) Aerobic marudzi anogona kurarama uye kubereka pa -25 ℃ -80 ℃. Iyo bhakitiriya inobatsira inoumbwa inogona kuuraya hutachiona hunokuvadza mune zvigadzirwa. Ichi chimiro chinoita kuti mamwe manyowa efotereza asaenzanisike uye kupfuura.
Tsvina & Manyowa Kunovhenganisa Tangi Vhidhiyo Ratidziro
Tsvina & Mufudze Kuvira Kusanganisa Tank Model Sarudzo
Saizi yechigadzirwa （L * W * H）
＞ 10m³ (kugona kwemvura)
＞ 20m³ (kugona kwemvura)
＞ 30m³ (kugona kwemvura)
Mhepo compressor aeration michina
Imwe seti ye otomatiki ekudzora masisitimu
Pashure: Hydraulic Kusimudza Composting Turner
Zvadaro: Wheel Type Composting Turner Muchina